Akuzona zonke iiBuddha zeVedgetarian? Akunjalo
Kubafundi nabazali Izinketho
Bonke abaBuddha bayimifuno, kunjalo? Ewe, hayi. Amanye amaBuddha ayimifuno, kodwa ezinye azikho. Iingcamango malunga nemifuno ziyahlukahluka kwihlelo ukuya kwihlelo kunye nakumntu ngamnye. Ukuba uyazibuza ukuba kufuneka uzinikele ekubeni ngumhlaza ukuze ube ngumBuddha, impendulo kukuba, mhlawumbi, kodwa mhlawumbi akunjalo.
Akunakwenzeka ukuba iBuddha yembali yayiyimifuno. Kwirekhodi yokuqala yeemfundiso zakhe, i- Tripitaka , uBuddha akazange avume abafundi bakhe ukuba badle inyama.
Enyanisweni, ukuba inyama yayifakwe kwisitya se-monk's alms, i-monk yayifuna ukuba idle. Iimonki zazingamkela kwaye zidle zonke ukutya ezinikezwayo, kuquka inyama.
Kukho okungafaniyo kwenyama yokulawula izibonelelo, nangona kunjalo. Ukuba iidonki zazi okanye zikhankanya ukuba isilwanyana sasixhelelwe ngokukhethekileyo ukunyusa ama-monks, kwakufuneka bayeke ukuthatha inyama. Ngakolunye uhlangothi, inyama eseleyo evela kwizilwanyana ezixhelelwe ukunyusa intsapho yokulala yayamkelekile.
UBuddha naye wabhala iintlobo ezithile zezilwanyana ezazingadliwayo. Ezi ziquka ihashe, indlovu, inja, inyoka, ikhwebu, ingwe, nebhebhe. Ngenxa yokuba inyama ethile yayingavunyelwe ngokuthe ngqo, sinokuthi ukutya enye inyama yayivunyelwe.
Vegetarianism kunye noMyalelo Wokuqala
Umyalelo Wokuqala weBuddha awuyikubulala . UBuddha uxelele abalandeli bakhe ukuba bangawubulali, bathathe inxaxheba ekubulaleni okanye kubangele ukuba baphile into ephilayo. Ukutya inyama, abanye bathi, uthatha inxaxheba ekubulaleni ngummeli.
Ekuphenduleni, kuthethwa ukuba ukuba isilwanyana sefile kakade kwaye singabulawa ngokuzodwa ukuzondla, ngoko akuyona into efanayo nokubulala isilwanyana. Oku kubonakala ngathi indlela uBuddha wembali wayeqonda ngayo ukutya inyama.
Nangona kunjalo, uBuddha wembali kunye neentloko kunye namantombazi awayemlandela babengabakhweli abangenamakhaya ababehlala kwiimfesane abazitholayo.
AmaBuddha awazange aqalise ukwakha iindwendwe kunye nezinye iindawo ezisisigxina de kubekho emva kokuba uBuddha afe. AbaBuddha bamaMonasti abahlali kwiimali zodwa kuphela kodwa kunye nokutya okukhulile, banikele okanye kuthengwa ngamonki. Kunzima ukuphikisa ukuba inyama enikezelwe kuyo yonke indawo yoluntu ayizange ivela kwizilwanyana ezixhelelwe ngokucacileyo egameni lommandla.
Ngako oko, amaninzi amanxalenye kaMahayana Buddhism , ngokukodwa, aqala ukugxininisa imifuno. Amanye amaMahayana Sutras , afana neLankavatara, anikezela ngokucacileyo iimfundiso zemifuno.
UbuBuddha kunye neVivearianism Namhlanje
Namhlanje, izimo zengcamango zemifuno ziyahluka ukusuka kwihlelo ukuya kwihlelo kunye nakwamacandelo. Kuphela, i- Theravada Buddhist ayizibulali izilwanyana ngokwazo kodwa zicinga ukuba imifuno ibe yinto yokuzikhethela. Izikolo zaseVajrayana, ezibandakanya iBibetan kunye neJapan ye-Buddhism ye- Shingon , khuthaza imifuno kodwa ayifumkele ukuba iyimfuneko ebalulekileyo kwi-Buddhist practice.
Izikolo zaseMahayana zisoloko zidla imifuno, kodwa nakumaqela amaninzi aseMahayana, kukho ukuhlukahluka kokusebenza. Ngokuhambisana nemithetho yasekuqaleni, abanye amaBuddha bangenakuzithengela inyama, okanye bakhethe i-lobster ephilayo ngaphandle kwetanki kwaye bayibilise, kodwa badle isitya sokutya esinikela kwi-party dinner party.
UbuBuddha budikibalalisa ubungqina obugqibeleleyo. UBuddha wafundisa abalandeli bakhe ukuba bafumane indlela ephakathi phakathi kweendlela eziphambili kunye nemibono. Ngenxa yalesi sizathu, amaBuddha asebenzisa imifuno ayidangelekile ukuba axhomekeke ngokunyanisekileyo kuwo.
Iimpawu zeBuddhist metta , ezibonisa inceba kuzo zonke izinto ngaphandle kokuzingca. UmBuddha akafuni ukutya inyama ngenxa yenceba ephilileyo, kungekhona ngenxa yokuba kukho into engalunganga okanye eyonakalisa umzimba wezilwanyana. Ngamanye amazwi, inyama ngokwayo ayilona nto, kwaye phantsi kweemeko ezithile, imfesane inokubangela ukuba uBuddha aphule imithetho.
Ngokomzekelo, masithi utyelela ugogo wakho osekhulile, ongazibonanga ixesha elide. Ufika ekhayeni lakhe kwaye ufumanise ukuba uphekele into eyayiyinto oyithandayo xa usisigxobhozo seengulube.
Akenzi ukupheka okukhulu ngenxa yokuba umzimba wakhe osekhulile awuhambanga ngekhitshi kakuhle. Kodwa inqwenela kakhulu intliziyo yakhe ukukunika into ekhethekileyo kwaye ubukele ukuba ugobe kwizo ngulube ezigayiweyo ngendlela oyisebenzisayo ngayo. Ukhangele phambili kule iveki.
Ndiyathetha ukuba ukuba unganqikazi ukutya loo ngqumbo yengulube, nokuba yinto yesibini, awuyiBuddhist.
Xa ndiyintombazana ekhulayo kwimimandla yasemaphandleni yaseMissouri, imfuyo eyayidla kwiindawo ezivulekileyo kunye nezinkukhu zazulazula zaza zanyuka ngaphandle kwezindlu zenyango. Kwakudala kudala. Uyabona imfuyo ekhululekileyo kwiifama ezincinci, kodwa ezinkulu "ifama yeefama" zingaba ziindawo ezinobuthathaka kwizilwanyana.
Iinyama zokuzalisa zihlala zihlala ngobuninzi babo emagumbini kangangokuba azinako ukujika. Ama-egg-laying-hens agcinwe "kwiibhetri zamabhethri" awanakwandisa amaphiko awo. Ezi zinto zenza umbuzo weemifino ubaluleke kakhulu.
NjengamaBuddha, sifanele sicinge ukuba iimveliso esizithengayo zenziwe ngeentlungu. Oku kubandakanya ukuhlupheka kwabantu kunye nokuhlupheka kwezilwanyana. Ukuba izicathulo zakho zesikhumba zenziwe ngezisebenzi ezixhaphakileyo ezisebenza phantsi kweemeko ezinobungangamsha, usenokuba uthenge neekhumba.
Inyaniso kukuba, ukuphila kukubulala. Akunakuphetshwa. Iintyatyambo kunye nemifuno zivela kwizinto eziphilayo, kwaye ukulima kufuneka zibulale iintsholongwane, iigundane kunye nezinye izilwanyana. Umbane kunye nokushisa kwamakhaya ethu kungavela kwiindawo ezilimaza indawo. Musa ukucinga ngeemoto esiziqhubayo. Sonke sigxininiswe kwiwebhu yokubulala nokutshabalalisa, kwaye ngokude nje siphila asikwazi ukukhululeka ngokupheleleyo.
NjengamaBuddha, indima yethu ayiyikulandela ingqalelo imigaqo ebhaliweyo kwiincwadi, kodwa ukukhumbula ingozi esenzayo nokwenza njengento encinci kangangoko.
Umbono wamaBuddha kwiMfazwe
Ngaba Ndifanele Ndizuze iSiqinisekiso soLawulo lweZentengiso?
Ngaba Ndifanele Ndizuze IsiGanga seMali?
Udibaniselwano loMlawuli wezoRhwebo
Ngaba ndifanele ndizuze iSigqeba soLawulo lwe-MBA?
Izizathu Zokuba Kufuneka Ufundisise Amashishini Ehlabathi
Ngaba Ndifanele Ndifumane iSigqeba soLawulo lwezeShishini?
Ngaba Ndifanele ndifumane iSigqeba soRhafu?
Ngaba Ndifanele Ndizuze I-Degree?
Iimiphunga ezidakileyo zokuNxila ukuze zihambisane namaCigars
Indlela iKirtan Chants Inokuphilisa Intliziyo
Uhlobo Luni Lwembongo Luyi-Pantoum?
IYunivesithi yase-Illinois e-Urbana-Champaign GPA, SAT, kunye ne-ACT Data
Iingoma zesiJamani kunye nesiNgesi zamaPhupha aphezulu kunazo zonke
Ukwahlukana Phakathi Kobubele Nesihawu
Lithetha ukuthini igama elithi "umYuda"?
Yiyiphi i-Degree efanelekileyo kuwe?
I-Titration ye-Back Definition
Iikhemikhali eziqhelekileyo zamakhaya - iMicrosoft
GridPane Example Code Inkqubo yomthombo
Ngaba iKrisimesi nguNgcwele iNtsuku yokunyanzela?
Iprotostars: Iilanga ezitsha ekwenzeni
Ukuzifundela Ukufunda isiJamani ngeNdaba emfutshane "iSandskulpturen"
Ukuqonda i-Genetic Code
Inkcazo yokuba Ngaba iMfazwe yenkwenkwezi i-Sci-Fi okanye i-Fantasy
Caltech GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Iintlobo ezi-3 zeeNgxelo zeMali
Ziziphi Iimpawu Zomculo Ezingcono?